Himalaya Dainik » हेर्दाहेर्दै जब चितुवाले छोरालाई लछार-पछार पार्दै लग्यो …
हेर्दाहेर्दै जब चितुवाले छोरालाई लछार-पछार पार्दै लग्यो …
बुधबार राति ८ बजे तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ मसारका कृष्णमाया राना छोरासँग घरको पिढीमा बसिरहेकी थिइन् । डेढ वर्षीय छोरा नारायण रानाले कट्टुमा पिसाब फेरेपछि कट्टु फेरिदिनका लागि कृष्णमाया घरभित्र पसेर बाहिर निस्कदा नारायणलाई चितुवाले झम्टियो । कृष्णमाया आत्तिइन्, चिच्याइन् तर केही सीप लागेन ।
“हेर्दाहेर्दै चितुवाले छोरालाई झम्टिएर लगिहाल्यो, एकछिन चिच्याए तर मेरो केही सीप लागेन”, आँखाभरी आँशु निकाल्दै कृष्णमायाले भनिन्, “सँगै भएको छोरालाई केही सेकेण्डमै चितुवाले लगेर मा¥यो ।” त्यतिबेला कृष्णमायाका ससुरा पनि घरको पिढीमै थिए। कान कम सुन्ने भएकाले चितुवाले नातिलाई झम्टेर लगेको उनले पत्तो पाएनन्।
“दुई चारदिन अगाडी पनि गाउँमा चितुवा आएको थियो, त्यतिबेला लखेटियो । यस्तो दुखद घटना हुन्छ भन्ने सोचिएन”,
बालकका बुबा विष्णुबहादुर मेलाबाट घर फर्किदै थिए । तत्कालै हारगुहार भएपछि स्थानीयवासी जम्मा भएर बालकलाई खोज्नेतर्फ लागे । एक÷डेढ घण्टा खोजेपछि घरभन्दा तलको जङ्गलमा नारायणको टाउको र एउटा हात फेला पर्यो । मसारमा चार घरधुरीको मात्रै बसोबास छ । चारैतिर जङ्गलले घेरिएको ठाउँ । मृ-त्यु भएका नारायण कृष्णमायाका कान्छा छोरा हुन् । जेठो छोरा रोहन ७ वर्षका छन् । घटना भएको बेला जेठो छोरा रोहन र सासु घरभित्र थिए ।
चितुवाको आ-क्रमणबाट बालकको ज्यान गएपछि स्थानीयवासी त्रसित छन् । स्थानीयवासी पूर्णबहादुर रानाले चितुवाले फेरि पनि आ-क्रमण गर्न सक्ने भएकाले सतर्क रहनुपर्ने बताए। “दुई चारदिन अगाडी पनि गाउँमा चितुवा आएको थियो, त्यतिबेला लखेटियो । यस्तो दुखद घटना हुन्छ भन्ने सोचिएन”, उनले भने।
बरालका अनुसार एक पटक चितुवाले आ-क्रमण गरेपछि उक्त चितुवा तीन÷चार दिन सोही ठाउँ वरपर घुम्ने गर्छ ।
तनहुँमा पछिल्लो समय चितुवाको आ-क्रमण बढ्दै गइरहेको छ । चितुवाको आ-क्रमणबाट विसं २०७४ फागुन यता दश जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् भने आठ जना घाइते भएका छन् । तनहुँमा भएका चितुवा आ-क्रमणका घटना सबै रातिको समयमा भएका छन् । “साँझ परेपछि चितुवाले आ-क्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ,” डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले भने, “घरबाहिर कुरेर बस्ने र बच्चालाई आ-क्रमण गर्ने गरेको यस अगाडीको घटनाले देखाएको छ ।”
जिल्लामा चितुवाको आ-क्रमणका घटना सबै साँझको समयमा भएकाले त्यसबेला विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बरालको सुझाव छ । “रातको समयमा बालबालिकालाई घरबाहिर एक्लै छाड्न हुँदैन, घर वरपरका झाडी सफा राख्ने, घरबाहिर उज्ज्यालो राख्नुपर्छ”, उनले भने। बरालका अनुसार एक पटक चितुवाले आ-क्रमण गरेपछि उक्त चितुवा तीन÷चार दिन सोही ठाउँ वरपर घुम्ने गर्छ ।
“जङ्गलका बीचमा भएका घरहरुमा चितुवाको बढी जोखिम देखिएको छ, रातिको समयमा बच्चालाई एक्लै नछाड्ने, घर बाहिर बत्ती राख्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने
यसैबीच डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले आज पीडितको घरमा पुगेर किरिया खर्चबापत रु ५० हजार प्रदान गरेको छ । उक्त रकम डिभिजन वन प्रमुख बरालले मृतक बालकका बुबा विष्णुबहादुरलाई प्रदान गरे। चितुवाको आ-क्रमणबाट मृ-त्यु भएका बालकको परिवारलाई थप रु नौ लाख ५० हजार प्रदान गरिनेछ ।
पीडितलाई सान्त्वना दिन पुग्नुभएका शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सतर्क हुनुपर्ने बताए। पी-डित परिवारलाई नगरपालिकाको तर्फबाट सहयोग गरिने बताउँदै उनले भने, “जङ्गलका बीचमा भएका घरहरुमा चितुवाको बढी जोखिम देखिएको छ, रातिको समयमा बच्चालाई एक्लै नछाड्ने, घर बाहिर बत्ती राख्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
डिभिजन वन कार्यालय तनहँुले चितुवा नियन्त्रणका लागि उक्त ठाउँमा तत्कालै खोर राख्ने भएको छ । कार्यालयले केही दिन अगाडी आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ समस्तीपुरमा दुई वटा खोर राखेको छ ।
काठमाडौंका यी क्षेत्रमा शुक्रबार-शनिबार विद्युत् काटिने
नेपाली फिल्ममा स्टार नायिकाः निरुता र रेखापछि को ?
बिहिबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण यस्तो हुन्छ !
प्रचण्डको निवासमा घु’स्यो कोरोना
शुक्रले गर्यो राशि परिवर्तन, यी ७ राशिलाई अत्यन्त शुभ
भारतीय बोर्ड परीक्षामा नेपाली मजदुरकी छोरी ९६.४ प्रतिशत अंक ल्याएर उतिर्ण
छोरीको सु-साइड नोट: बुवाको नाममा २० लाख जम्मा गरेकी छु
सवारीमा जोर विजोर लागू, राति हिँडडुल गर्न समेत रोक
राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय
मोदीले भन्छन्ः ‘भगवान् रामसँग नेपालको आत्मिय सम्बन्ध’